CAALAMKA ONLINE - Xaaladda Masar oo Cirka isku sharertay meeshii illaa hadda ugu darmaydna maraysa
Xaaladda Masar oo Cirka isku sharertay meeshii illaa hadda ugu darmaydna maraysa
Written by Galxamur
Wednesday, 03 July 2013 19:53
Waddanka Masar oo iyaamihii ugu danbeeyeyba Kacdoon Siyaasadeed aan culus ka socdey ayaa hadda waxaa ay gaartey meeshii ugu xumayd ilaa hadda. Shalay ayey ahayd markii Militariga Masar ay Xumuumada Masar iyo Mucaaradka kasoo horjeeda u qabteen 48 Saacadood inay ku xaliyaan khilaafka ka dhexeeya, haddii kale ay iyagu la wareegayaan Hogaanka Dalka Qorshe dhibka looga saari karana ay soo gudbin doonaan.
Waqtigii kamadanbeysta ahaa ayaa dhamaaday Galabta wax wadahadal ah oo ay Xukuumada iyo Mucaaradku galeena ma jiraan. waxaa la sheegay in saacadihii ugu danbeeyey meelo badan oo Magaalada Caasimada ee Qaahira kamid ah, lagu soo daadiyey Askar Gaadiidka dagaalka iyo taangiyaal wata.
Waxaa kaloo la sheegay inay Talefishinka afka Dowladda ku hadla ay lawareegeen Militarigu ayna shegeen in saacadaha soo socda ay war soo saari doonaan.
Dhanka kale Warar aya lasoo sheegaya, in Militariga ay amar ku bixiyeen inaan Madaxweynaha Masar iyo Wakiilo sare oo ka tirsan Xisbigiisa aysan Waddanka ka safri karin. Madaxweynaha Masarna waa ku gacan sayray amarka iyo Kamadanbeysta ay Militarigu u qabteen iyo Mucaaradka.
Marka Xaaladda Masar ayaa waxaa laga baqayaa inay Faraha ka baxdo oo Dagaal Hub laysu adegsanayo uu ka dhex bilowdo qolooyinka is haya.
Last modified on Sunday, 04 January 2015 12:59
Published in: WARARKA CAALAMKA
Fadlan dhiibo Fikirkaaga. Fadlan u hadal si dhex dhexaad ah aan Cay iyo Qabyaalad ama wax kale oo xun ku jirin. ◄ Mahadsanid.►
Ra'iisul Wasaarihii hore ee Talyaaniga oo 7 sano oo Xarig ah lagu xukumay
Sirdoonka Maraykanka oo lagu eedeeyey inay Wadamo badan jaajuusaan